सन्दीप र सोमपाल छनोट हुँदा को-को छनोट भएनन् ? | Hamro Khelkud
सन्दीप र सोमपाल छनोट हुँदा को-को छनोट भएनन् ?
क्यानाडाको आधिकारिक टि-२० लिग प्रतियोगिता ग्लोबल टि-२० को ड्राफ्ट बिहीबार सम्पन्न भयो । प्रतियोगिताले दिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार नेपालबाट १२ खेलाडीले ड्राफ्टमा नाम दर्ता गराउँदा २ खेलाडी मात्र छनोट भए ।
पछिल्लो समय विश्वका शीर्ष फ्रेन्चाइज लिगमा प्रभाव जमाइरहेका सन्दीपले आफ्नो न्युनतम मूल्य ६० हजार अमेरिकी डलर तोकेका थिए । उनलाई ड्राफ्टअन्तर्गत आईसीसी एसोसिएटको पहिलो खेलाडीको रुपमा टोरोन्टो नेसनल्सले छनोट गरेको थियो । यसैगरी सोमपाल कामीलाई पनि विनिपेग हक्सले छनोट गर्यो । सोमपालले आफ्नो मूल्य ३ हजार अमेरिकी डलर तोकेका थिए ।
सन्दीप र सोमपाल छनोट हुँदा नेपालबाट आधिकारिक नाम दर्ता भएका १० खेलाडी भने छनोटमा परेनन् । कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले प्रतियोगितामा नाम दर्ता गराएका थिएनन् । नाम दर्ता गराएका अन्य खेलाडी र उनीहरुले तोकेको न्युनतम मूल्य यसप्रकार छ :
जनक भण्डारी – २५ हजार डलर
करण केसी – ७ हजार डलर
अभिनव यादव – ३ हजार डलर
प्रशान्त नेपाल – ५ हजार डलर
ललित नारायण राजवंशी – ४ हजार डलर
राजेश प्रसाद बोहोरा – १० हजार डलर
रोहितकुमार पौडेल – ३ हजार डलर
दीपेन्द्रसिंह ऐरी – ३ हजार डलर
नरेश बुढाएर – ५ हजार डलर
सुनील धमला – १० हजार डलर
रोहित पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, करण केसी र ललित नारायण राजवंशी (घडी घुम्ने दिशामा)
प्रतियोगितामा ड्राफ्टका लागि नाम दर्ता गराउन अनलाइनमार्फत खुला आवेदन दिइएकोले जोकोहीले पनि नाम दर्ता गराउन सकिने प्रावधान रहेको थियो । यद्यपी छनोट भएका खेलाडीले भने राष्ट्रिय टोलीबाट स्वीकृति लिन आवश्यक छ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका व्यवस्थापक रमण शिवाकोटीका अनुसार छनोट भएका खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउने राष्ट्रिय टोलीको स्वीकृति लिनेछन् ।
‘केहि खेलाडीले हामीसँग परामर्श लिएर नाम दर्ता गराएका हुन् । केहिले आफैं व्यक्तिगत रुपमा पनि दर्ता गरेका थिए । केहि नाम नयाँ देखेकोले उनीहरु आफैंले दर्ता गराएको हुनसक्छ, ‘ शिवाकोटीले भने । उनले अलराउन्डर शरद भेषावकरले नाम पठाउन ढिलाई गरेकाले अन्तरिक रुपमा भने उनको नाम ड्राफ्टमा सहभागी गराइएको जानकारी दिए ।